Shir-weynaha Qaran ee Dastuurka oo maanta furmay magaalada Muqdisho.[Masawiro]
May 13, 2018 - Written by Editor
Muqdisho:-Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay Shir-weynaha Qaran ee Dastuurka ee taariikhiga ah oo ay ka qaybgalayaan in kabadan 350 qof oo isaga kala yimid gobolada iyo dalka dibadiisa. Shirka masuuliyiintii ka soo qaybgashay waxaa kamid ahaa Ku-Simaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Gudoomiyaha Aqalka Sare, Ra’iisul Wasaaraha XFS, Ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjirayaal, Gudoomiyayaasha Baarlamaanada Dowlad Goboleedyada iyo Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan Dowaladda Federaalka iyo Dawlad Goboleedyda.
Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo khudbad ka jeediyay Shir-weynaha ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah. “Mudanayaal iyo Marwooyin, Wasaaradda aan hogaamiyo waxay bahwadaag la noqotay Guddiyada Qaran iyo Wasaaradaha Dowlad Goboleedyada ee ay shaqo wadaagayihiin, waxaan kulamo wadatashiyo ah oo badan la qaadanay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Muddo sanad ah oo qaban-qaabo ah kadib, waxaa maanta noo suurtagashay inaan Shir-weynahan qabano, waa mid taariikhi ah; waa maalin taariikhi oo wadada u xaareysa dhameeystirka Dastuurka iyo xoojinta Sareynta Sharciga”. Ayuu yiri Wasiir Avv Cabdi Xoosh.